Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || रत्ननगरमा ११३ घरधुरी शौचालयविहीन – kayakairan.com
रत्ननगर, ४ मंंिसर
चितवनलाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएपनि रत्ननगर नगरपालिकामा सबैको घरमा शौचालय छैन । विश्व शौचालय दिवसको अवसरमा लुमन्ती आवासको लागि सहयोग समूह रत्ननगरको आयोजनामा सोमबार आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार विपन्न समुदायमा अझै ११३ घरधुरीमा व्यक्ति शौचालय छैन ।
तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै लुमन्तीका संयोजक सिंहबहादुर लामाले विपन्न समुदायमा शतप्रतिशत शौचालय निर्माणको एक सय दिने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार रत्ननगर–४ चौधरी मिलन टोलमा २७ घरधुरीमध्ये १८ घरधुरीको व्यक्तिगत शौचालय रहेको, २ जनाले छिमेकीको शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको ७ घरधुरीले बाहिर नै शौच गर्ने गरेको फेला परेको छ । रत्ननगर–११ स्थित विश्वास टोलमा ७७ घरधुरीमध्ये १० घरधुरीले छिमेकीको प्रयोग गर्ने गरेको, १२ स्थित नवजागृति टोलको ४२ घरधुरीमध्ये ३६ घरको व्यक्तिगत, ५ घरले छिमेकीको र १ घरले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको लामाले बताए ।
जिल्लाभर नै समस्या
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने दिसा– पिसाबको व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन हुँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिररहेको छ । समयमा दिसा–पिसाब नगरेमा विभिन्न रोग लाग्न सक्छ भने त्यही दिसा–पिसाब जहाँ पायो त्यही गरेमा सरुवा रोग पनि लाग्न सक्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका ईञ्जिनियर विराट घिमिरेले बाटो घाटो हिँड्डुल गर्नेलाई पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गर्छन् । भएका शौचालयको पनि व्यवस्थापन नहुँदा प्रयोगमा आएका छैनन् । ठूलो भीडभाड हुने ठाउँमा महानगरपालिकाले बनाएको मोबाइल शौचालय भए पनि छ महीनादेखि यो बिग्रिएर बसेको उनी जानकारी दिन्छन् । जिल्लामा मानिसको भीडभाड हुने, नारायणगढ बजार, रत्ननगर र पर्सा बजारमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन् । यात्रा गर्ने यात्रुका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गमा पनि सार्वजनिक शौचालय नभएकाले यात्रु खुला ठाउँको भर पर्न बाध्य छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र पाठक जहाँ पायो त्यही शौच गर्दा सरुवा घातक रोग फैलने बताउनुहुन्छ । शहरी क्षेत्रको सौन्दर्यताका लागि पनि सार्वजनिक शौचालय ठाउँठाउँमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शालिकराम पौडेल स्थान व्यवस्थापनको अभावमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन कठिन भएको बताउँछन् । पर्याप्त शौचालय नभएको बताउँदै उनी आकर्षक शौचालय बनाउने योजना रहे पनि आवश्यक ठाउँमा स्थानको अभावमा शौचालय बनाउन नसकेको हो बताउँछन् । कतिपय ठाउँमा शौचालय बनिसकेपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले पनि शौचालय बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । बनिसकेका कैयौँ सार्वजनिक शौचालय पनि प्रयोगमा नआइ जीर्ण भैसकेका छन् ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका उपनिर्देशक मूत्ररोग विशेषज्ञ डा. निर्मल लामिछाने दिसा–पिसाब समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार मूत्रथैलीमा २०० मिलिलिटर पिसाब पुगेपछि शौच गर्न मन हुन्छ । यो पिसाब बढेर ३५० मिलिलिटर पुगेपछि मानिस पिसाब च्यापेर शौचालय खोज्न थाल्दछ । यति गर्दा पनि पिसाब फेर्न नपाएमा पिसाब थैलीबाट मिर्गौलातर्फ पिसाब फर्किने उनी बताउँछन् ।
मिर्गाैलाबाट दुई वटा नली हुँदै पिसाब बगेर पिसाब थैली भरिन्छ । समयमा पिसाब नफेरेमा फर्किएर पुनःमिर्गाैलामा फर्किने हुँदा यसबाट मिर्गौलामा दबाब भई पिसाब छान्न समस्या हुने डा. लामिछानेको भनाइ छ। लामो समयसम्म पिसाब नफेर्ने गरेमा दीर्घकालीनरुपमा मिर्गौलाको समस्या देखिने र दिसा पनि समयमा नगर्दा दिसाको पानीको मात्रा कम हुँदै जाने र गोटा पर्नाले थप जटिलता थपिनेमा उनी जोड दिन्छन् ।
खुला ठाउँमा दिसा–पिसाब गर्दा झाडापखाला, कमलपित्त, आउँ, हैजा, विषमज्वरोजस्ता रोग लाग्न सक्छन् । नेपाल चिकित्सक संघका जिल्लाअध्यक्ष तथा वरिष्ठ फिजिसियन डा. प्रकाश खतिवडा खुला ठाउँमा दिसा–पिसाब गर्दा पानीमा मिसिएर महामारी रोग फैलिन सक्ने बताउँछन् । झिङ्गामार्फत् त्यस्ता रोग सर्ने र भयावह हुन सक्ने भएकाले शौचालयमा मात्रै दिसाब पिसाब गर्न र त्यसपपछि राम्रोसँग हात धुनपर्नेमा उनको सुझाव छ । एक ग्राम दिसामा एक करोड भाइरस, १० लाख ब्याक्टेरिया, एक हजार परजीवी र १०० जुकाको अण्डा हुनसक्ने बताइन्छ । घातक रोग लगाउने यी जीवाणुलाई आँखाले राम्रोसित देख्न सकिँदैन । दिसाजन्य रोगका कारण वर्षेनी झाडापखालालगायत प्रकोप फैलिने गरेका छन् । यस्ता रोगले सयौँको ज्यान जाने गरेको छ । रासस
त्यस्तै पारिश्रमिक टोलको ७१ घरधुरीमध्ये ७० को व्यक्तिगत शौचालय छ भने १ घरले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्छन् । डाँफे मुनाल टोलमा ७६ घरमध्ये ६९ को व्यक्तिगत शौचालय छ । ५ घरले छिमेकीको र २ घरले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्छन् । १३७ घरधुरी रहेको शितल टोलमा ३२ घरधुरीको अझै पनि व्यक्तिगत शौचालय छैन । लुमन्तीले रत्ननगरको २१ वटा गरीब, विपन्न तथा सुकुमबासी समुदायमा काम गर्दै आएको छ । गोष्ठीमा उपस्थित सरोकारवालाले एक सय दिनभित्रै ती सबै समुदायमा शतप्रतिशत शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेकी रत्ननगर नगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर विमला दुवाडीले शौचालय निर्माणका लागि ती समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताइन् । स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा पनि अझै खेलबाड रहेको भन्दै उनले यसका लागि व्यक्तिगतरुपमा ती समुदाय नै लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । आवश्यकताअनुसार भने नगरपालिकाले सहयोग गर्ने दुवाडीले बताइन् । कार्यक्रममा रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीष्मराज पौडेल, नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सरस्वती लामा, विपन्न समुदाय व्यवस्थापन मञ्चका अध्यक्ष फुलमान तामाङ, आकृति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष फुलकुमार लामालगायत विभिन्न टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरुले १०० दिनभित्र शतप्रतिशत शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।